कोरोनाको त्रासदी : पोखरामा रगत अभाव
कास्की । पोखरामा रगतको अभाव देखिएको छ । कोराना भाइरस संक्रमणको त्रासले गर्दा विभिन्न संघसंस्थाले नियमित गर्दै आएको रक्तदान कार्यक्रम रोकिदिँदा पोखरामा रगतको अभाव भएकाे हाे । काेरोना त्रासका कारण विभि...
अस्पतालबाट ‘निस्किए’ प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि करिब दुई सातादेखि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारपछि बालुवाटार फर्किएका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १२ दिन अस्पताल बसेका ओलीलाई त्रि...
अष्ट्रेलियाको गृहमन्त्री डुटोनमा कोरोना भेटियो
एजेन्सी । दक्षिणी गोलार्धको राष्ट्र अष्ट्रेलियाका गृहमन्त्री पिटर डुटोनमा कोरोना भाइरस(कोभिड- १९)पोजेटिभ भेटिएको छ । गृहमन्त्री डुटोनलाई कोरोना पोजिटेभि भएको क्‍विन्सल्यान्ड हेल्थले पुष्टि गरेको हो ।...
एजेन्सी । कोरोना भाइरस( कोभीड-१९)को त्रासदी बढेसँगै विभिन्न खेल तालिका एवं खेल आयोजनाहरू पर सरेका छन् । कोभीड-१९ को कहर चल्दै जाँदा भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डले दक्षिण अफ्रिकाको विरुद्ध सिरिजको दुई...
क्यानडाका प्रधानमन्त्री पत्नीमा कोरोना भेटियो, प्रधानमन्त्री पनि १४ दिन आइसोलेसनमा रहने
एजेन्सी । उत्तर अमेरिकी देश क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडुकी पत्नी सोफिया जर्जियामा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री पत्‍नी जर्जियालाई कोरोनाको संक्रमण भएपछि १४ दिनका लागि सेल्फ आइसोलेस...
कोरोनाको कहर : अष्ट्रेलियामा ५०० भन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाइने
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत बुधबार देखि विश्वभर फैलिरहेको 'कोभीड-१९' नामाक श्वासप्रश्वास समबन्धि रोगलाई 'महामारी'को संज्ञा दिएसँगै विभिन्न देशहरूले सतर्कता अपनाउन थालेका छन् । यसैक्रममा दक्षि...
कन्चनपुर । कोभिड– १९ का शंकास्पद बिरामीका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश तथा सबै जिल्ला अस्पतालमा ‘आइसोलेशन कक्ष’ स्थापना गरेको छ । आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीसहित कक्ष स्थापना गरिएको सामाजिक विकास मन्त्र...
इटालीम १८९ जनाको मृत्यु, इरानमा पनि ७५ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । चीनको हुवेइ प्रान्तस्थित वुहान सहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण हिजो(बिहीबार) एकै दिन ३ सय ४५ जनाको मृत्यु भएको हो । हालसम्म यस भाइरस १२६ वटा देशमा फैलीसकेको छ । चीनपछि इटाल...
कोरोनाको आशंकामा ६ जना आइसोलेसनमा
काठमाडौं । चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना अर्थात कोभिड- १९ को सन्त्रासले विश्व अहिले आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा देखा परेको कोरोनाको प्रभावले नेपालमा पनि सन्त्रास पैदा...
क्यान्सरका बिरामीलाई कोरोना भाइरसले असर गर्छ कि गर्दैन ?
Corona Virus and Cancer क्यान्सरका विरामीहरुले जान्नु पर्ने कुराहरु : कसलाई बढी खतरा हुन्छ ? सवैभन्दा बढी खतरा रगतसंग सम्वन्धित क्यान्सरका विरामीहरुलाई जो विरामीहरु Chemotherapy लिइराखेकाछन् ...
ब्रिटेनको स्वास्थ्यमन्त्रीमा भेटियो कोरोना भाइरस..
एजेन्सी । ब्रिटेनको स्वास्थ्य मन्त्री तथा कन्जरभेतिभ पार्टीको सांसद नादीन डोरिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । उनले आफैं यस कुराको जानकारी दिएकी हुन् । बीबीसीले आज(बुधबार) आफ्नो रिप...
जडिबुटीमा छ प्रतिरोधी क्षमता
वनस्पतिविज्ञ तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकले रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बढाउन नेपालमै पाइने जडीबुटी गुर्जोको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा पाइने महवत्पूर्ण जडीबुटी गुर्जो हो । गाउँघरतिर गुर्...
पाेखरा विमानस्थलका ७१ चिनियाँ कामदार क्वारेन्टाइनमा
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काम गरिरहेका १ सय ९० चिनियाँ कामदारमध्ये ७१ जनालाई 'सेल्फ क्वारेनटाइन' मा राखिएकाे हाे । चीनकाे विशेष ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेकाे पाेखरा विमानस्थलमा अधिका...
राष्ट्रपति सी वुहान पुगे..
एजेन्सी । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ आज(मंगलबार) बिहान कोरोना भाइरस(कोभीड-१९)को महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण कार्यको निरीक्षणको लागि हुबेइ प्रान्त र यसको राजधानी वुहान पुगेका छन् । गत जनवरीबाट वुहा...
कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन बाँकेमा उच्च सतर्कता
बाँके । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भित्रिन नदिन बाँकेमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाका सबै निकायलाई उच्च ...
सुर्खेतमा एक युवामा ज्वरो देखिएपछि चिकित्सकको निगरानीमा
सुर्खेत । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित मेडिकलहरुमा सर्जिकल माक्सको अभाव देखिएको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) संक्रमण फैलिन सक्ने सन्त्रास बढेपछि यहाँका व्यवसायीले महङ्गो मूल्यमा मौज्द...